November 7, 2021 - ApannPyay Media
November 7, 2021 by ApannPyay Media
ဆောင်းရာသီမှာ ခြေဖဝါးကွဲလေ့ရှိသူတွေအတွက် အသုံးဝင်စေမည့် သဘာဝကုထုံးများ ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်း၊ အေးလွန်းခြင်းနှင့် ခြေထောက်မှ ခြေဆီမပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် ခြေဖဝါးနာခြင်း၊ ကွဲခြင်းတို့ဖြစ် တတ်ကြပါသည်။ အကျိုးဆက်က ဖိနပ်လည်းမစီးနိုင် သလို လမ်းလည်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ချေ။ အိမ်တွင်းသုံးကုထုံးနည်းလေးဖြင့် ယုံယုံကြည်ကြည်စမ်း သပ်ကြည့်ပါ အံ့ဖွယ်သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည် နည်းလမ်းလေးမှာ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် ခြေထောက်ကိုသန့်စင်အောင်ဆေးပြီး မန်ကျည်းမှည့်အနှစ် အနည်းငယ်နှင့် ကွမ်းရွက်အနည်းငယ်ကို ကြိတ်ပြီး ခြေဖဝါးကွဲဒဏ်ရာအား သုတ်လိမ်းပေးပါ။ သက်သာပျောက် ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောမြန်မာနည်းလေးဖြစ်ပါသည်။) ဆောင်းတွင်းမှာ ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်းကို ကာကွယ် ကုသရန် နိုဝင်ဘာလကုန်ရင် ခရစ္စမတ်ရာသီထဲလည်း ဝင်တော့မယ်။ ဆောင်းရာသီလို ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာ အရေပြားဆဲလ်သေတွေ ဖနောင့်မှာစုပုံပြီး ဖနောင့်ကွဲတတ်ပါတယ်။ ဖနောင့်ကွဲတဲ့အခါ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့အပြင် အသားမာကြီးတက်ပြီး ခြေထောက်အလှကို ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖနောင့်ကွဲခြင်းကို ကုစားနိုင်တဲ့ … Read more
မြောင်မြို့နယ်တွင် ပုံသဏ္ဍာန် ထူးခြားလှသည့် ရှေးဟောင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့နယ် ကျောင်းဖြူကျေးရွာအနောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှသည့် ရှေးဟောင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများကို ဒေသခံတစ်ဦးမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရပါတယ်။ ရွှေသားချည်းသက်သက်ဖြင့် အနုလက်ရာပြောင်မြောက်စွာ ပြုလုပ်ထားသော ၎င်းရွှေထည်ပစ္စည်းများတွင် ရွှေနားဒေါင်းများ ရွှေဆွဲပြားများအပါအဝင် အခြားအမျိုးအမည် မခန့်မှန်းနိုင်သေးသော ရွှေထည်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်ပြီး ပျူခေတ်လက်ရာများ၊ဖြစ်နိုင်သည် ဟု (အကြမ်းမျဉ်း) ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အနုလက်ရာ ရွှေထည်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိရသည့် ကျောင်းဖြူရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံရာ ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်၏ ဇာတိရွာဖြစ်သော၊ရွာပုလဲရွာအနီးတွင်တည်ရှိသည့်ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။မြောင်မြို့သည်အထက်မြန်မာပြည်စစ်ကိုင်းခရိုင်၏အနောက်ဖက်ပိုင်းတွင်ရှိ၍မြင်းမူမြို့၏အနောက်တောင်ဖက်၁၄မိုင်အကွာဧရာဝတီမြစ်နှင့်ချင်းတွင်းမြစ်တို့ ဆုံရာထောင့်ချိုးတွင် ဧရာဝတီနှင့်၊ချင်းတွင်းမြစ်တို့ဆုံရာ ထောင့်ချိုးတွင် ဧရာဝတီမြစ်၏လကျာ်ဖက်ကမ်းပေါ်၌ တည်ရှိသည်။ မြောင်မြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်ရာ မြို့ဖြစ်သည်။ မြောင်မြို့နယ်သည် ၁၇၉ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသည် ။ ချောင်းဦး … Read more
အားလုံး သတိထားဖို့ပါ… Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက်၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ သ ကြား ပ မာ ဏ အ များ အ ပြား ပါ ဝင် တဲ့ အ တွက် ကြောင့် သွေး ချို ဆီး ချို ဝေ ဒ နာ ရှင် များ လည်း သောက် သုံး … Read more
ငွေကိုဘယ်လိုထားမလဲ? နည်းစနစ်လိုပါတယ် ငွေကို ပိုက်ဆံအိတ် အံဆွဲ၊ မီးခံသေတ္တာ စသည်မှ ာထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထားတဲ့ နည်းစံနစ် လိုပါတယ်။ မိမိငွေ အဝင် များဖို့၊ အထွက် နည်းဖို့၊ လာဘ်ကောင်းဖို့၊ လုံခြုံစိတ်ချဖို့၊ ကံတက်စေဖို့၊ အဝင်ကောင်း သလို အထွက်လည်း ကောင်းသောနည်းနဲ့သာ ထွက်ဖို့ ဖုန်းရွှေ Fung Shui ပညာက အခုလို အကြံပြု ပါတယ်။ ၁။ ကရဝေးရွက် နဲ့အတူ ထားပါ။ အကျိုးအနာ မပါသော ကရဝေး ရွက် အနည်းဆုံး တစ်ရွက်နဲ့ အတူ ထားပါ။ ငွေပွားများ လာစေပါတယ်။ ၂။ အကျိုးအနာ မပါတဲ့ ဆန်စေ့ ၂၁ စေ့ကို ပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ ထုပ်ပြီး ငွေနဲ့အတူ … Read more
လက်ဝါးနှစ်ဖက် ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော် က ဘယ်လိုလူစား မျိုးလဲဆို တာ မှန်းလို့ရပါတယ်
လက်ဝါးနှစ်ဖက် ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော် က ဘယ်လိုလူစား မျိုးလဲဆို တာ မှန်းလို့ရပါတယ် ဒီတ ခါပြောပြမှာကတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်လို့ သင့်ချစ်သူ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀% မှန်တယ်လို့ စာရေးသူမဆိုလိုပါဘူး။သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖဝါးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖဝါးက အချစ်လမ်းကြောင်းကနေ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းငယ် မှန်းဆကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်။ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ဝေဖန်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၁။ လက်ဖဝါးပေါ်က အချစ်ရေးလမ်းကြောင်း အတူတူဖြစ်နေရင် သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖဝါးဟာ အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင် အရမ်းကို ကံကောင်းတဲ့သူလို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတော့နော်။ ဒီလက်ဖဝါးပိုင်ရှင်မျိုးဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တကယ်အလေးနက်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ချစ်သူဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသူဖြစ်ပြီး ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုကို ရွံမုန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူ (သို့) လက်တွဲဖော်ဟာ ပညာရှိပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ … Read more
ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေခဲ့ရတာ နှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်
ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေခဲ့ရတာ နှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ် ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့စိတ်ညစ်နေခဲ့ ရတာနှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အင်္ဂလိပ်ဆေး ဗမာဆေးစုံလို့ တစ်ရက်က သောက်နေကြငါးကြီးဆီကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး သွားကြားထိုးတံနဲ့ဖောက်ပြီးခေါင်းမလျှော်ခင် ၁ -၂ နာရီလောက်လိမ်းထားပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက် တာခုဗောက်တွေမထတော့ဘူး ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆိုတာလေ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဇောင်းလက်ပက် အနှစ်ထဲကိုငါးကြီးဆီဖောက်ထည့်ပြီးရောလိမ်းထား လိုက်တယ် ပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက်တာ ဗောက်ပျောက်ချင်တဲ့သူများလုပ်ကြည့်ပါ ကိုယ်တွေ့လုပ်နေတာမို့ပါ အဆင်ပြေတယ် ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေခဲ့ရတာ နှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ် ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့စိတ်ညစ်နေခဲ့ ရတာနှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အင်္ဂလိပ်ဆေး ဗမာဆေးစုံလို့ တစ်ရက်က သောက်နေကြငါးကြီးဆီကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး သွားကြားထိုးတံနဲ့ဖောက်ပြီးခေါင်းမလျှော်ခင် ၁ -၂ နာရီလောက်လိမ်းထားပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက် တာခုဗောက်တွေမထတော့ဘူး ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆိုတာလေ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဇောင်းလက်ပက် အနှစ်ထဲကိုငါးကြီးဆီဖောက်ထည့်ပြီးရောလိမ်းထား လိုက်တယ် ပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက်တာ ဗောက်ပျောက်ချင်တဲ့သူများလုပ်ကြည့်ပါ ကိုယ်တွေ့လုပ်နေတာမို့ပါ အဆင်ပြေတယ် ေခါင္းမွာေဗာက္ေတြရွိလို႔ … Read more
ပံ့သကူ ပစ်ကာ ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတော့ သတိပြုပါ မကြာမီ ကာလအတွင်း တန်ဆောင်တိုင်လပြည်နေ့ ကျရောက်လာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ညတွင် ပံ့သကူ ပစ်ကာ ကုသိုလ်ပြုသည့်ဓလေ့မှာ လွန်စွာ ချစ်စရာကောင်းသလို အလှူခံရော အလှူရှင်ရော ပီတိဖြစ်ရတဲ့ အလှူဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလသည် ပြည်တွင်း စ.စ်မက် ဖြစ်ပွါးနေသော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ ပံ့သကူ အလှူများကို အများပြည်သူ မြင်သာသော အိတ်အကြည်များဖြင့်သာ ထည့်သွင်း ပစ်ကြဖ်ု့ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းမမြင်ရသော အိတ်မဲများ စက္ကူအိတ်များ အခြားသော အတွင်းပစ္စည်း မမြင်ရသော အရာများနှင့် ထည့်သွင်းကာ ပံ့သကူပစ်ခြင်းမပြုပါရန် အလေးအနက် သတိပေးအပ်ပါသည်။ ပံ့သကူ ကောက်သော ပြည်သူများအနေဖြင့် အတွင်းရှိ ပစ္စည်းအား ထင်သာ မြင်သာ မရှိပါက … Read more
သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ မသင်ကာစရာ အထုတ်တစ် ထုတ်တွေ့လို့ ထိပ်လန့်နေတဲ့ ရဲအောင်
သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ မသင်ကာစရာ အထုတ်တစ် ထုတ်တွေ့လို့ ထိပ်လန့်နေတဲ့ ရဲအောင် သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ မသင်ကာစရာ အထုတ်တစ် ထုတ်တွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှ အရမ်းကိုအန္တရယ်များလွန်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတွေ့ခဲ့လို့ထိပ်လန့်နေတဲ့ ရဲအောင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေယခုအခြေအနေတွေအရ အမိနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု့တွေရှိနေဆဲ့ပါပဲနော်။အနုပညာရှင်လေ ာကမှာလဲပြည်သူဘက်တော်သားနဲ့စကစဘက်တော်သားဆိုပြီးကဲဲပြားနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့အနုပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်တစ်ခေတ်ကအရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရဲအောင်က ဆိုရင်လဲပရိတ်သတ်တွေအများကြီးကအားပေးခံခဲ့ရတာပဲဖစ်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်တွေချစ်ခဲ့ရတဲ့ဝါရင့်မင်းသားတစ်ယော က်ကတော့စကစဘက်မှဖတ် ခေါ်တဲ့ MRTV ရုပ်သံ Showပွဲကိုတ တ်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ လုပ်ရက်တစ်ခုကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှု့တွေကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဘက့တော်သားမဟုတ်တဲ့သူရဲ့လုပ်ရက်တစ်ချို့ကိုပရိတ်သတ်တွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတတယ်။ Showပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့မင်းသားရဲအောင်ရဲ့နေအိမ်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဗုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မသင်ခါစရာ အထုတ်တစ်ခုတွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်ခဲ့လို့ဗုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့။ခုချိန်မင်းသားရဲအောင်တို့အိမ်မှာစကစဘက်မှစစ်သားများရောက်ရှိစစ်ဆေးနေတ ယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေး ပါဘူး။ဖတ်ရှု့ခဲ့လို့ကျေးဇူးပါ။ Credit သူ႔ရဲ့ေနအိမ္မွာ မသင္ကာစရာ အထုတ္တစ္ ထုတ္ေတြ႕လို႔ ထိပ္လန႔္ေနတဲ့ ရဲေအာင္ သူ႔ရဲ့ေနအိမ္မွာ မသင္ကာစရာ အထုတ္တစ္ ထုတ္ေတြ႕လို႔ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရာမွ အရမ္းကိုအႏၲရယ္မ်ားလြန္းတဲ့ပစၥည္းတစ္ခုေတြ႕ခဲ့လို႔ထိပ္လန႔္ေနတဲ့ ရဲေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယခုအေျခအေနေတြအရ အမိနိုင္ငံမွာနိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ႔ေတြရွိေနဆဲ့ပါပဲေနာ္။အႏုပညာရွင္ေလ ာကမွာလဲျပည္သူဘက္ေတာ္သားနဲ႔စကစဘက္ေတာ္သားဆိုၿပီးကဲဲျပားေနခဲ့ပါတယ္။ျပည္သူေတြကေတာ့အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္တစ္ေခတ္ကအရမ္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့မင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ရဲေအာင္က ဆိုရင္လဲပရိတ္သတ္ေတြအမ်ားႀကီးကအားေပးခံခဲ့ရတာပဲဖစ္ပါတယ္။ပရိတ္သတ္ေတြခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ဝါရင့္မင္းသားတစ္ေယာ က္ကေတာ့စကစဘက္မွဖတ္ ေခၚတဲ့ MRTV ႐ုပ္သံ Showပြဲကိုတ တ္ေရာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။သူ႔ရဲ့မထင္မွတ္တဲ့ လုပ္ရက္တစ္ခုေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ေဝဖန္မႈ႔ေတြကိုခံေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူဘက့ေတာ္သားမဟုတ္တဲ့သူရဲ့လုပ္ရက္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုပရိတ္သတ္ေတြကျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါတတယ္။ … Read more
ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့် သားသမီးမယူခဲ့တာ ခုတော့ အိုဇာတာမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးချစ်စရာ တချိန်က အငြိမ့်ပွဲေ တာ်တော် များများမှာ ပရိတ်သ တ်တွေကို ရယ်မောေ ပျာ်ရွှင်စေ ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးချစ်စရာ က သူ့ဘဝအကြောင်း နဲ့ပတ်သ က်ပြီး နောင်တရ အားငယ်ချက် တချို့ကို အခုလိုပဲရင် ဖွင့်လာ ပါတယ်။ သူ့ဘဝမှာ သူများတွေလိုပဲ မိသားစု စုံစုံလင်လ င်နဲ့ နေချင်တဲ့အေ ကြာင်းနဲ့ သူများတွေ မိသားစုနဲ့ ပျော်ပါးစုံလင်ေ နတာမြင်ရင် အားကျမိတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇနီးဖြစ် သူရဲ့ နှလုံးရောဂါကြောင့် သားသမီး မယူခဲ့ဖြစ်လို့ သားထော က်သမီးခံ တယောက်မှ မရှိတဲ့ သူ့ဘဝကို အားငယ်နေေ ကြာင်းအခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြ … Read more
သားဦးစေန မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား? တကယ်လား?
သားဦးစေန မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား? တကယ်လား? သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက်စနေသားသမီးဟာဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံးစနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်းလောကမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးစနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ရတနာအခါတော်နေ့ပဲစနေနေ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စပေါ်သည်တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာကတော့စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄ရရတာနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စပေါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄ရရပဲနော်စနေနေ့မရှိပဲတရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်းမရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာဒါကိုသားဦးစနေမီးလိုမွှေဆိုပြီး ပေါက်ကရပြောသူက ရှိခဲ့တယ် ရဟန်းတော်တွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ ဘာတွေလဲ သားတော်တွေ မဟုတ်ဘူးလား သားတွေထဲက ဦးဆုံးသားကို ဘာလို့ခေါ် သားဦး လို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံး စနေနေ့မှာ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော့ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်တယ် ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြု ခွင့်တောင်းတယ် သံဃာရတနာ … Read more